I-Apple yokungena kwiBhidi yoLwahlulo lweToshiba iyathengiswa | Ndisuka mac
I-Apple ingena kwi-bid yokwahlulahlula iToshiba kwintengiso
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo besiyazi loo nto Toshiba, Inkampani yaseJapan kwicandelo lobuchwepheshe kunye nomthengisi wezinto kwiinkampani ezininzi, iApple phakathi kwabo, beka ukuthengisa enye yezahlulo zayo ezibaluleke kakhulu, ejolise ekuqokeleleni ingxowa mali kuwo onke amasebe akhe.
Lo Ukwahlulahlulahlula kwe-NAND Flash semiconductor iya kuthengiswa ukuqala malunga ne- $ 9 yezigidigidi kwinqanaba lotshintshiselwano. Iinkampani ezininzi kwihlabathi liphela ziye zangqina ezi ndaba kwaye zinomdla wokufumana olu lwahlulo yenye yeenkampani ezidumileyo ehlabathini malunga noku. I-Apple yenye yazo.
Idabi lokufunyanwa sele liqalile. Ewe kulungile Western Digital, umenzi ophambili wenkumbulo yohlobo lwe-NAND emhlabeni, wayengowokuqala ukuba nomdla ekuthengeni, kancinci ngabadlali abancinci bongezwe kwindawo. Ke, kunye neApple, iinkampani zaseMntla Melika ezinje IAmazon, iBroadcom okanye ungumnikazi Uphando.
Le meko ayothusi: I-Toshiba okwangoku yenye yezona ntambo zomeleleyo nezizinzileyo zonikezelo kwihlabathi. Kunye naye, Apple, Uphando Nabani na oya kuthi ekugqibeleni akwazi ukuthenga olu lwahlulo lwenkampani yaseJapan uyakufumana ishishini lokuvelisa imemori yeFlash ukuze lisetyenziselwe izixhobo zakhe kwaye zithengiselwe ezinye iinkampani zeli candelo.
Umdlalo unokuba yincutshe. Ngaphandle kweendleko ezinokugcinwa ziinkampani ezinje ngeApple okanye Uphando Ukuba benze iinkumbulo zabo, kwimeko ye-Apple iya kuyiphumeza loo nto Samsung ilahlekelwe ngumthengi ophambili wezinto ezenziweyo zolu hlobo lwenkumbulo.
Okwangoku, amanani afikelele kwizindululo zika-Apple awaziwa, Amazon o Uphando. Nangona kunjalo, kuthekelelwa ukuba Broadcom wanikela ku Toshiba malunga ne-18 yezigidigidi zeedola. Ukongeza, ayigwetyelwanga ngaphandle into yokuba kukho abanye abakhuphisana nabo ukuba bathathe olu luhlu lokwahlulahlula ngobuchule ukulungiselela iimfuno zeenkampani ezininzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ingena kwi-bid yokwahlulahlula iToshiba kwintengiso
Ezona zixhobo zeendaba zosasazo simahla zeMac